Vidio ny mpanamboatra immunoglobulin G (IgG) - Phcoker Chemical
Ny fanananao immunoglobulinina kely loatra amin'ny ranao dia manome anao vintana lehibe kokoa hahazoana aretina. Ny fananana be loatra dia mety ……….
Horonan-tsary Immunoglobulin G (IgG)
Ny antibiotika dia proteinina izay ataon'ny sela fiarovana anao hiadiana amin'ny bakteria, virus, ary mpanafika hafa.
Ny fananana immunoglobuline kely loatra amin'ny ranao dia manome vahana kokoa ny fahazoana aretina. Ny fananana olona marobe dia mety midika fa voan'ny alikaola na hery fanefitra mahery vaika.
Ny immunoglobuline dia mamehy, manaiky ary manimba ny bakteria, poizina, virosy, ary antigène hafa. Ny vatana dia miaro ny antigène hiady amin'ny antigènes. Avy eo, amin'ny fotoana manaraka dia misy antigen miditra ao amin'ny vatana, dia manentana ny famokarana antibiakanana mitovy.
Ny maha-zava-dehibe ny immunoglobuline dia fanalahidy amin'ny fahazoana ny antony mahatonga ny bovine colostrum supplementation dia mety manelingelina ny fahasalaman'ny olombelona. Ny immunoglobuline sy ny hery fanefitra mihetsiketsika mavitrika ao amin'ny colostrum bovine dia naseho hanampiana ny hampihenana ny mety hisian'ny autoimmune, tsy misy areti-mifindra ary ny idiopathika (tsy fantatra antony), ao anatin'izany: pox-akoho ， Hepatitis ， paiso.
Ny colostrum Raw, fresh dia misy karazana immunoglobulins isan-karazany: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD
immunoglobulin g (IgG): Nampiasaina hamahana ny olana momba ny hery fiarovana sy ny otrikaretina. Ny colostrum Bovine dia misy IgG bebe kokoa noho ny immunoglobulin hafa.
Inona ny IgG?
Antibodies dia singa lehibe amin'ny tsimatimanota amin'ny humoral. IgG no karazana antibody lehibe hita amin'ny rà sy ny tsiranoka ivelan'ny sela, mamela azy hifehy ny otrik'aretina ao amin'ny vatana. Amin'ny famatorana karazan'aretina maro karazana toy ny viriosy, bakteria ary holatra, IgG dia miaro ny vatana amin'ny aretina. Miaro anao amin'ny otrikaretina ireo antibodiôma ireo amin'ny "fahatsiarovana" izay mikraoba nosedraina anao taloha.
Ny ambaratonga mahazatra IgG, serum IgG serum dia matetika ambany noho ny 200 mg / dL, ary ny haavon'ny IgM sy IgA dia ambany noho ny 20 mg / dL. Ny tarehimarika CD19 + B-cell dia matetika ambany noho ny 0.1%.
Ny IgG no hany immunoglobulin olombelona mandalo avy amin'ny reny mankany am-bohoka hamindra ny tsy fahampiana.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny tsy fahampiana IgG?
Ny tsy fahampian'ny IgG dia mety ho tratry ny aretina. Ny tsy fahampiana IgG dia mety hitranga amin'ny taona rehetra.
Ny fitsapana ra izay mandrefy ny haavon'ny immunoglobulin no dingana voalohany amin'ny famaritana ny tsy fahampian'ny IgG. Ny fitsapana sarotra kokoa nefa tena manandanja dia misy ny fandrefesana ny tahan'ny antibody ho valin'ny vaksiny sasany.
Ireo otrikaretina izay matetika misy fiantraikany amin'ny olona tsy ampy IgG dia:
Ny otrikaretina sela sy ny aretim-pisefoana hafa
Areti-mifindra amin'ny gastrointestinal
Otrik'aretina izay miteraka tenda mafy
Vita taolana, mamaivay ary tandindomin-doza
Ao amin'ny olona sasany, ny areti-mifindra dia miteraka ratra izay manimba ny làlambe sy ny fiasan'ny havokavoka. Mety hisy fiantraikany amin'ny fifohana rivotra io. Ny olona voan'ny tsy fahampiana IgG dia matetika mahita fa ny pnemonia sy ny vaksiny amin'ny gripa dia tsy mitazona azy ireo tsy hahazo ireo aretina ireo.
Tombontsoa ny IgG Powder
Ny IgG Powder dia loharanom-pahalalana novoizina sy tsy misy tohatra azo avy amin'ny alikaola na immunoglobulin G (IgG) azo alaina ho famenon-tsakafo. Ity fomba amboarina IgG madio ity dia manampy amin'ny fitazonana ny hery fiarovana voa-tsinay amin'ny alalan'ny fatorana mikraoba sy poizina be dia be ao anaty vavon-tsinay.
Ny vovony IgG dia manome immunoglobuline tsy mifototra amin'ny Allergenic ho fanatsarana ny hery fiarovana Mucosal
Ny vovony IgG dia manampy amin'ny fandanjalanjana ny fiakaran'ny mikraoba
Ny vovobony IgG dia manohana ny fahasalamana sy fahadiovan'ny GI Barrier
Ny vovony IgG dia manampy amin'ny fifandanjana amin'ny fifandanjana amin'ny fanaintainana mahazatra
Ny vovo IgG dia manampy ny fandanjalanjana ny tsirairay sy ny fitazonana ny hery fiarovan'ny vatana salama.
Ny vovony IgG dia manampy amin'ny ady amin'ny Bakteria: ny immunoglobulins dia afaka manampy amin'ny fampidinana ny loza ateraky ny mikraoba manimba, amin'ny alàlan'ny fisorohana na fanalefahana olana ara-pahasalamana sasany.
Ny vovony IgG fampiasana ary fampiharana
Raha ny menaka immunoglobulin dia tsy sokajy mahazatra amin'ny tsena, misy kosa ny vokatra mifaninana. Ny fijerena ny tsenan'ny famenon'ny immunoglobulin dia mijery tsara.
Ny fikarohana dia naneho fa ny lgG dia mety hahomby amin'ny fampihenana ny microorganisme hita ao amin'ny gastrointestinal tract. Ny colostrum dia tsy ahitana habetsaky ny lgG be fotsiny, fa koa ny lafin-javatra maro izay mety mahasoa ny hery fiarovana.
Ny vovobony IgG manampy ny immunoglobuline mifantoka amin'ny fanatsarana ny tsy fahampian'ny mucosal, mandrisika ny fomba fanamboarana ny vavony mahazatra ary manampy amin'ny fifandanjana mikraoba.
IgG sy Fcγ Mpandray an-tsitrapo amin'ny hery fiarovana sy ny fangirifiriana amin'ny tsimok'aretina Tomas Castro-Dopico, Menna R. Clat pono Front Immunol. 2019
Ny fitambaran-drà fanefitra dia mety mitarika ny famokarana antibiôtera T, tsy miankina, autoanti-IgG famokarana antibody ao amin'ny totozy J Exp Med. 1985 Jan 1
Kinétika ny immunoglobulin manokana M, E, A, ary G ao amin'ny otrikaretina kongenital, voalohany, ary cytomegalovirus faharoa, nosedrain'ny famonoana immunosorbent miaro-tena amin'ny androbe. SL Nielsen, I Sørensen, HK Andersen J Clin Microbiol. 1988 Apr; 26 (4): 654–661.
Vokatry ny sakafom-bazaha telo amin'ny fihenam-bidy amin'ny famindrana ny tsi-fananan-tena sy ny fahasalamana amin'ny fahantrana ao anaty zanak'omby any Dairy any California, manaraka ny fiofanana momba ny fitantanana ColostrumDeniece R. Williams, Patrick Pithua, Angel Garcia, John Champagne, Deborah M. Haines, Sharif S. Aly Vet Med Int. 2014; 2014: 698741
Ny fanombanana ny vokatry ny jiro ultraviolet amin'ny otrikaretina bakteria voakobaka ho an'ny ronono sy colostrum, ary eo amin'ny colostrum immunoglobulin G V. Pereira, ML Bicalho, VS Machado, S. Lima, AG Teixeira, LD Warnick, RC Bicalho J Dairy Sci. Mpanoratra sora-tanana; Azo alaina ao amin'ny PMC 2015 M